nattalin: Golden Eye Spyware ရွှေရောင်မျက်လုံးနဲ့ Password ခိုးတဲ့သူ
Golden Eye Spyware ရွှေရောင်မျက်လုံးနဲ့ Password ခိုးတဲ့သူ
လိုက်လုပ်ချင်မှလုပ်နော်....အဆိုးအကောင်းတာဝန်မယူပါဗျာ.... SO SORRY......THANATAL...
Golden Eye 4.5 ကို အခုhttp://download.cnet.com/GoldenEye/3000-2162_4-10379821 .html နေရာကနေ Download ကို တချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Save File လုပ်ပြီး Ok ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Golden Eye Win Zip ဖိုင် Download Folder ထဲ ကို ရောက်လာ ပါလိမ့်မယ်။ Golder Eye.Zip ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ပါ။ Right click လုပ်ပြီး Extract Here ကိုနှိပ်ပြီး ဖြည်ရပါမယ်။ ဖြည်လို့ရလာတဲ့ Folder ထဲကမှ Golden Eye.setup ဖိုင်ကို တွေ့ပါမယ်။ ပြီးရင် Setup File ကို နှစ်ချက် ကလစ်နှိပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။ Next နှိပ် ပြီးရင် Install ကိုနှိပ် Finish ကို ဆက်တိုက် နှိပ်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Register လုပ်ရပါမယ်။ မလုပ်ပါက ၁၅ရက်ပဲ သုံးလို့ ရပါတယ်။ Register လုပ်နည်း က လွယ်ကူ ပါတယ်။ Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ auto ပေါ်လာချိန်တွင် Register ဆိုတဲ့ ပေါ်မှာ နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Download တုန်းကပါလာတဲ့ Folder ကို ပြန်ဖွင့်ပါ။ အဲဒီထဲက Golden Eye 4.5 Crack File ဆိုတာကို ဖွင့်ပြီး အဲဒီထဲက keygen.exe ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Register ဆိုတဲ့ နေရာမှာ keygen ထဲက name ရယ် codeရယ်ကို copy လုပ်ပြီး Register ထဲမှာ ထည့်ပါပြီးရင်တော့ ok နှိပ်ပါ။ Register လုပ်တာ အောင်မြင်ကပါ Box အပေါ် ၁၅ရက်သာ အသုံးပြုရန် စာသား ပျောက်သွား ပါလိမ့်မယ်။
Golden Eye ကို ပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင် Shortcut က Ctrl +Alt+Shift+P ကို တွဲနှိပ်ပေး ပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ထိပ် က Report Tab ကိုနှိပ်ပါ။Report Tab မှအရေးကြီးသောအရာများမှာ-
keyStokes =မိမိ Keyboard မှရိုက်ထည့်သောစာများကိုဖော်ပြသည်။အထူးသဖြင့်မိမိ Gtalk ၀င်တုန်းမိမိ Gtalk ရဲ. Username နှင့် Password ကိုမှတ်ထားပေးသည်။